China CRGO Cold Yakakungurutswa Silicon Steel Coil YeTransformer fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Cold rolled oriented silicon simbi, inozivikanwawo seinotonhora yakatenderedzwa transformer simbi, yakakosha ferrosilicon alloy inoshandiswa mu transformer (core) kugadzira indasitiri.Kugadzira kwayo kwakaoma uye tekinoroji yayo yekugadzira yakasimba.Iyo inonyanya kukamurwa kuita yakajairwa yakatarisana nesilicon simbi (CGO) uye yakakwira magineti induction yakatarisana nesilicon simbi (HiB).
1) Material: zvese zviripo
3) Kurapa kwepamusoro: sezvinodiwa nemutengi
5) Kugadzirisa sevhisi: kucheka, kudhirowa, kubaya, nezvimwe.
Oriented silicon simbi inonyungudutswa neokisijeni inoshandura.Iyo billet inopisa yakakungurutswa, yakajairwa, inotonhora yakakungurutswa, yakanyungudutswa pakati uye inotonhora yakakungurutswa kechipiri, yobva yadhirowa uye yakanyungudutswa pakupisa kwepamusoro, uye pakupedzisira yakaputirwa neyakavharisa layer.
①Ore-②iron kugadzira-③kugadzira simbi-④kukunguruka-kupisa-⑤pickling-⑥kukunguruka kutonhora-⑦annealing-⑧inotonhora inokunguruka simbi yesilicon (yakatarisana nesimbi yemagetsi).
Musiyano Pakati peCRGO neCRNGO
Cold rolled oriented thin silicon steel strip inogadzirwa ne pickling, kutonhora kukunguruka uye annealing oriented silicon simbi tambo ine ukobvu hwe0.30mm kana 0.35mm.Cold rolled non-oriented silicon steel sheets anopisa akakungurutswa mumakoiri ane ukobvu hunosvika 2.3mm kubva kumabhiliti esimbi kana kuramba achikanda mabheti.
Iyo magineti yeinotungamirwa nesilicon simbi ine kutungamira kwakasimba, iyo ine yakaderera kurasikirwa kwesimbi kukosha, iyo yepamusoro permeability uye yakakwirira magineti induction kukosha pasi peimwe nzvimbo yemagineti.
Cold yakakungurutswa silicon simbi ine hunhu hwekutsetseka kwepamusoro, ukobvu hweyunifomu, yakakwirira stacking coefficient uye yakanaka punching chivakwa, uye ine yakakwirira magineti induction uye yakaderera simbi kurasikirwa pane inopisa yakakungurutswa silicon simbi.Kushandisa inotonhora yakakungurutswa simbi yesilicon panzvimbo yekupisa yakakungurutswa silicon simbi kugadzira mota kana transformer inogona kuderedza huremu hwayo uye vhoriyamu ne0% -25%.Kana inotonhora yakatenderedzwa yakatenderedzwa silicon simbi ikashandiswa, kuita kwayo kuchava nani.Kuishandisa panzvimbo yekupisa yakakungurutswa silicon simbi kana yakaderera-giredhi inotonhora yakakungurutswa silicon simbi inogona kuderedza kushandiswa kwesimba kwetransformer ne45% -50%, uye kushanda kwetransformer kwakavimbika.